Ukuphonononga The Best Discoveries With College amaqabane | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Ukuphonononga The Best Discoveries With College amaqabane
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 25/12/2020)
Xa uhamba kwi kunye nabo, kulungile ngokugqibeleleyo ukuba i hambo kwaye ube nje ezizenzekelayo. Lakhenketha indawo kungekho ozilindele okanye naziphi na izicwangciso kwangaphambili ngokwenene ngendlela engcono yokubona efihliweyo. It ishiya indawo ngokwaneleyo for fun kunye nokuhlola uncensored. ke, uqala phi nabahlobo bakho xa ufuna ukwenza izinto ezizizo ngaphandle kokwenza uluhlu olungqongqo? Unokubafumana njani ezifunyaniswe best kude nekhaya? Zithini izinto onokukhetha kuzo?
Well, lucky kuwe, ngoku kungenzeka ukwenza mbumbulu flight lomlinganiselo ukuba visa ngaphandle kokuba lomvuzo ukuba itikiti moya okanye hambo zokuhamba. Oko kwenza ukuba ukuhamba ngaphandle hambo. ngaphandle koko, ubuchwepheshe wenze lula iimephu kunye ebomini zifikeleleke, ukuze sithembela ngokupheleleyo kwifowuni yakho amacebiso zokuhamba. Apha zi 5 amacebiso ngaphezulu ukuhlola ezifunyaniswe best banamaqabane beekholeji:
Train Transport Ingaba I-Eco-Friendly Way To Travel. Thi sihloko kubhalwe ukuba afunde Train Travel yi Gcina A Isitimela, Engambi Train Amatikiti Website In The World.
1. Joyina ukhenketho lokuhamba simahla
Khangela yaye babhalise ukulungiselela ukhenketho ukuhamba simahla kwi ngosuku lwakho lokuqala kwidolophu entsha. Kulula ukufumana – nje ukubuza amalungu abasebenzi ehotele uya kokuchitha ubusuku bokuqala, okanye khawubuze nabanye ababehamba lomfundi ukufumana kwihostele yakho. Ukukhangela ngokukhawuleza kwi-intanethi kuya kukunceda ufumane okulungileyo ukhenketho lokuhamba simahla. Qaphela ukuba nangona ukhenketho ngokuyintloko simahla, kungcono ukuba ubekele eceleni uhlahlo-lwabiwo mali oluncinci lwakho ukuhambisa izikhokelo zokhenketho.
Njani umsebenzi ukuhamba ivideo uhambo? Ufumana ukhenketho ukuhamba simahla umhla kunye nexesha xa uya kufumaneka, ubhalisela, indawo intlanganiso kwaziswa kuwe, ubonisa up ngelo xesha ngexesha, uze ushiye yonke enye kwisikhokelo tour. Esi sikhokelo Uhambo akuyo kuya kukunceda ufumane umzi kunye kwimida yayo lula kwaye bafumane ulwazi olunzulu emzini izakhiwo ezizodwa yaye isiko lendawo.
2. Vumela Yourself Ukuze Get Lost
Ke kaloku, ukuba guide ukhenketho onamava ukuncedile azihlube ubunkazana ezininzi yesixeko, ngoku lixesha lokuba ukufumana ngo- a station oluzenzekelayo kwaye uhlole indawo kwi yakho. Ngabom ukuphepha iindawo touristy yaye "ulahlekile" elwandle abantu. Ke ngenxa yokuba wena nabahlobo, akunyanzelekanga ukuba ukhathazeke kakhulu ngokhuseleko lobuqu. Uya kufumanisa inqwaba ubuncwane obufihliweyo – izinto akukho umkhenkethi owakha wambona ngaphambili. Kuya kukunceda ukuba zivulelekile ukuthetha nabantu ongabaziyo kuba akukho namnye uya kukunceda ufumanise ngaphezu bendawo isixeko.
3. Sebenzisa iimephu zikaGoogle
Imephu zikaGoogle okanye iimephu ze-Apple kulungile, nangona iApple ingenakubetha ingqikelelo kunye nokuchaneka kweemephu zikaGoogle. Mhlawumbi kungenxa yokuba uninzi abasebenzisi intanethi ziye Android-anikwe izixhobo, ukuze kakhulu ethandwa ukubuyekeza lwenziwa ku kwiimephu Google. Ukufunda imephu Google of an imisebenzi indawo ngokwenene kakuhle group esijikelezayo – Inika ingcamango ogqibeleleyo yintoni eziningqongileyo. reviews Google uya kukuxelela ezindaweni zokudla, indlela yokufumana wayini ilungileyo, kwaye luxwayisa on apho ukuba atyelele njengokuba umhambi college kuwe. Olu lwazi kunceda uhlole fumanisa ngakumbi.
4. Ukuya Iziganeko Local
Ukuba awufuni ukuba bodwa ezitalatweni ngaphandle iinjongo ezicaciswe, kutheni ukuya isiganeko bendawo? Cela emhlabeni ukuze ubambisene, ibonisa art, Ikonsathi, okanye mikhosi yaye hlala kuyo nayiphi na kuzo. Ukuba nithanda imidlalo, yiya kwibala lemidlalo okanye uye kumdlalo webhola ekhatywayo wasesitalatweni. Unga lidlale ngokutyeziswa ukuba anele iindwendwe. Oku kuya kukunika ngokwembono enzulu isixeko ze uvumele wena ukuba basebenzisane balapha kunye namava nemizabalazo yabo yemihla ngemihla kunye novuyo – njenge lendawo. Ukubaleka ugqatso xa uthembela ukukwazi kwakho ukusebenza. Bekhuphisana amaqabane akho uya kwenza kube mnandi ngakumbi.
5. Eqhinga Social Media
reviews facebook uya kukuxelela apho ukuya backpacking nabahlobo beekholeji, ntoni ukuze ubone nakuba, nayo yonke into ofuna ukuyazi malunga endaweni. Joyina ikholeji Iqela labahambi 'olukhethileyo, bathi on Facebook, kwaye ukhethe iingqondo zamalungu abanolwazi. kwimidiya iphuma egolide ukuqokelela iinkcukacha ezibalulekileyo abantu abanamava wazibonela ukuba ummandla elinikiweyo.
Ukushwankathela, Yonke imihla lithuba yokufunda naliphi iqela lwabahambi ukuvelela college entsha. nje izicwangciso efanelekileyo yakho inshorensi yezempilo kunye zokuhamba, kodwa ungazikhawuleli kuhambo olusisigxina. Vumela self yakho ukwazi abaselula baphonononge kwaye fumanisa ukuba uthanda isihloko sethu, ke odola Amatikiti yakho ngololiwe Gcina A Isitimela.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Ukuphonononga The Best Discoveries With College amaqabane” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fdiscoveries-college-mates%2F%0A%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Kule linki ilandelayo, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lo kuxhumana ukuba IsiNgesi iindlela emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha pl ukuba fr okanye de kwiilwimi ezininzi ozikhethele.
Ikholeji Iikholeji Ukufunyanwa Travel Travelingtips
Ndingumhlalutyi weshishini, kunye nomhlohli wezezimali ebesenza uphando lokuziphuhlisa kule minyaka mibini idlulileyo kwaye ngoku akasekho emhlabeni. Ndiyimbaleki yemarathon kwaye ndibeke ukubaleka kweGreat Wall Marathon njengeyona njongo yobomi! Umsebenzi wam wobomi kukukhuthaza abanye ukuba baphile ngamaphupha abo. - Unako cofa apha ukuze Qhagamshelana nam